Thiri Mingalar Hotel | ezStay
Thiri Mingalar Hotel 28 Jun - 30 Jun
Thiripyitsaya No.2 Street, Aung Theiddhi Ward, No(3) Quarter, Nyaung Oo Tsp. Excellent 8.5
Thiri Mingalar Hotel ဟာဆိုရင် သီရိပစ္စယလမ်း ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ ရွှေစည်းခုံဘုရားကြီးနဲ့ နီးသလို ညောင်ဦးဈေးနဲ့လည်း နီးပါတယ်။ အဝေးပြေးကားဂိတ်နဲ့ဆို ၅ မိနစ်၊ လေဆိပ်နဲ့ဆိုလည်း ၇ မိနစ်လောက်ပဲ ဝေးတာမလို့ ကားနဲ့သွားသွား၊ လေယာဉ်နဲ့သွားသွား အဆင်ပြေစေပါတယ်။ အစားအသောက်ဆိုလည်း ဟိုတယ်မှာတင် မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ယူရို အစားအစာ မျိုးစုံ စားလို့ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကြီးရှိတာမလို့ပူစရာမရှိပါဘူး။ အနီးအနားမှာဆိုလည်း ညောင်ဦးဈေးရှိတာမလို့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပဲ ၀ယ်ချင်ချင်၊ အညာ အစားအစာတွေပဲ စားချင်ချင် အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ပုဂံမှာလည်ပတ်ဖို့ ကား၊ E-Bike ကိုလည်း ဟိုတယ်မှာတင် ငှားလို့ရပါတယ်။ ၀န်ဆောင်မှုတွေကလည်း မနက်စာ၊ TV၊ Aircon၊ Minibar၊ Wifi၊ ရေပူရေအေး တွေပါ၀င်ပြီး ခြံကျယ်ထဲမှာမလို့ လမ်းတွေ ဘာတွေလည်း ဆင်းလျှောက်လို့ရပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ပဲ ပြင်ဆင်ထားတာမလို့ စိတ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဈေးလည်းသက်သာ ၀န်ဆောင်မှုလည်း ကောင်းတာမလို့ အသင့်တော်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝင်ရောက်ချိန်2PM
ထွက်ခွာချိန် 12 PM
အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန် လက်မခံပါ
အသင့်ဖျော် ကော်ဖီ / လက်ဖက်ရည် အထုတ်
အခန်း01234567 8
အိပ်ယာ အပို	 0
အခမဲ့ ကြိုဆိုမှု အအေး
အခန်း01234567 8910 11 12
အခန်း0123
အခန်း01 2
အခန်း01
- Free cancellation3days ahead of arrival date - No refund within3days. - If later than3days, the cancellation fee 100% will be applied of total room charges.
Traveled on 19 Jul 2017
"Nice hotel in the good location"
We stayed from 19 July 2017 to 22 July 2017. Hotel owner is very friendly and staff are helpful. Hotel is in good location. It is near to important locations such as restaurants, main road, museum and Shwe Si Gone Pagoda. Dinner and lunch are available upon request and they are nice and authentic. Overall, we hadahappy stay during visit in Bagan.
Kaung Lwin Oo
Traveled on 19 Dec 2017
Good Service, hospitality and the people are friendly. It hasagood location not too far from the night market street so that you can taste different kinds of foods and have tea or coffee. The best point of this hotel is location . You can relax quietly, haveagood buffet and enjoy your stay.
Htet Hein Htun
Traveled on9Dec 2017
အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ Hotel ပါ
Enter booking ID to give review
Check booking ID
Please fill the form to give review.
Select rating Very bad Bad Average Good Very good